Published on 2020-09-17 राजसंस्था
राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट सर्बोच्च अदालतका भूतपूर्व प्रधान न्यायधिश अनिरूद्ध प्रसाद सिंहको निधनमा दुख: ब्यक्त गरिबक्सेको छ । मौसूफबाट स्वर्गिय सिंहको आत्माको चीर शान्तिको कामना गरिबक्सदै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरिवक्सेको छ । अाज राजाका सम्बाद सचिब डा. फणिराज पाठकले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त जानकारी गराउनु भएकाे हाे ।
सिंहको १०४ वर्षको उमेर मंगलबार बेलुका बत्तीसपुतलीस्थित आफ्नै निवासमा निधन थियो। उनी निमोनियाका बिरामी थिए। २०१३ साल जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएपछि उनी त्यहाँकाे पहिलाे प्रधानन्यायाधीशका रुपमा तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका थिए। उनी भन्दा अघि प्रधान न्यायालय हुँदा हरिप्रसाद प्रधान साे अदालतका प्रमुख न्यायाधीश थिए। सर्वाेच्च अदालतमा उनी सिंहपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आएका थिए। २०१५ सालमा सर्वोच्च अदालतका महत्वूर्ण फैसला समेटिने नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन सिंहले सुरु गरेका थिए। सिंह २००३ सालमा झापामा गोश्वारा कार्यालयको हाकिमका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए। २०१२ सालमा शाही सल्लाहकारमा भएका सिंह लगत्तै प्रधानन्यायाधीश भएका हुन्। २०१६ सालमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, कानुन, वन मन्त्री, २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले नारायणहिटीमा स्थापना गरेको जाहेरी विभागको प्रमुख भएका थिए। त्यस्तै उनलाई २०३२ सालमा संविधान सुधार आयोगको अध्यक्ष, २०३४ सालदेखि झण्डै एक दशक तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्त भएका सिंह त्यसपछि राजसभा स्थायी समितिको सभापतिसमेत भएका थिए।
Published on 2020-08-19 राजसंस्था
Published on 2020-07-16 राजसंस्था
काठमाडौँ – हिमानी कोषले कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानका लागि विभिन्न संस्थालाई पीपीईसहितका सुरक्षात्मक सामग्री तथा बाढी–पहिरोसहितका विपदका प्रभावितहरुलाई राहत सामग्री वितरण गरीबक्सेकाे छ । हिमानी कोषले बिहीबार विशेष कार्यक्रम गरी कोषका अध्यक्ष युवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मीदेवी शाहबाट सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सामग्री तथा राहतका सामान सम्बन्धी संस्था या समुदायका प्रतितिनिधलाई हस्तान्तरण गरीबक्सेकाे थियाे ।
हिमानी कोषले छाउनीमा रहेको पञ्चकन्या स्कूलका विद्यार्थी, चितवनको चेपाङ्ग बस्ती, काठमाडौँका विभिन्न आश्रय गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि खाद्यान्नसहितका सामग्री प्रदान गरेको हो । यस्तै युवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मीदेवी शाहबाट डिस्इन्फेक्सन स्प्रे, पीपीई, वाटर फिल्टर, झुल, जीवनजल, साबुन, बालबालिकाका लागि लिटोसहितका सामग्री हस्तान्तरण गरीबक्सेकाे थियाे । राहत वितरण कार्यक्रममा अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी शाह, शीतास्मा राज्यलक्ष्मीदेवी शाह, कोषकी सदस्य सचिव रेशमा राना, बोर्ड सदस्य डा. अपर्ना शाह सहित उदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा युवराज्ञी राज्यलक्ष्मीदेवी शाहबाट लकडाउनकाे कारण पछिल्लो समय देशभर आत्महत्याका घटनाहरु बढेको सुनिएकाे बताइबक्सँदै सबैलाइ मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गिरबक्सेकाे थियाे । युवराज्ञीबाट कुनै पनि प्रकारको मनोसामाजिक समस्यादेखिएमा मनोविमर्शकर्ताको सहयोग लिन नहिचकिचाउन पनि आग्रह गरिबक्सेकाे छ ।
Published on 2020-07-13 Main News
राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट बाढी पहिरोले पुरयाएको क्षति प्रति दुःख ब्यक्त गरिबक्सेको छ ।
राजाबाट पीडित सबैको आवश्यक राहत, उद्धार र उपचार तत्काल होस भनेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिबक्सेको छ ।
मौसुफबाट अहिले बाढी पहिरो तथा डुबानमा परेका सबै नेपालीकोलागी यथा शिघ्र आवश्यक राहत पुरयाउन गणतन्त्रवादी सरकारलाई आग्रह गरिबक्सँदै प्रत्येक बर्ष हुने गरेको प्राकृतिक विपदालाई समयमा नै सजगता र सर्तकता अपनाएको भए यति धेरै धनजनको क्षति नहुने बताईबक्सेको छ ।
मौसुफबाट बाढी, परिहो तथा डुबानबाट मृत्यु भएकाहरुप्रति समवेदना तथा घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिबक्सेको छ ।
आज राजाका सम्बाद सचिब डा. फणिराज पाठक मार्फत जारी गरिबक्सेको सन्देशको पूर्ण विवरण
पुर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट बाढी पहिरोले पुरयाएको क्षति प्रति दुःख ब्यक्तः
यो बर्षको बर्षातको कारण हाम्रो देशको हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरैले ज्यान गुमाएको, घाईते हुनु परेको, आफ्नो घर, गोठ तथा जायजेथा गुमाउनु परेको र धेरै घरवार विहिन भएको सुन्दा, देख्दा र बुझ्दा म अत्यन्त दुखित भएको छु ।
शोक, वियोग, ब्यथा र वेदनाको यो स्थितिमा सबैबाट सबैको राहत, उद्धार र उपचार होस् । विनासको यो बेला पर्याप्त सहयोग, सुब्यवस्था तथा निगरानी पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुकमा बाढी, डुबान र भू–क्षयको जोखिम हरेक बर्ष हुने प्रकृया हो, त्यसैले यसको रोकथाम र सजगताको निम्ति समय मै पर्याप्त ध्यान दिन सके क्षति न्यूनिकरणमा योगदान पुग्नेछ । प्रतिकूल मौसमी प्रकृतिका कारण उत्पन्न प्रकोप र पीडाबाट जनताले मुक्तिको सास फेर्न पाउन् भन्ने मेरो ईश्वरमा प्रार्थना छ । प्राकृतिक विपदको यो समयमा म शोक सन्तप्त पिडित सबैमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाईते भएका सबैको शिध्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
२०७७ साल असार २९ गते
राजाबाट देशलाई बचाउन सडकमा आउन नेपाली जनतालाई आह्वान
Published on 2020-06-24 Main News
राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देवबाट देशलाई बचाउन अब सडकमा आउन नेपाली जनतालाई आह्वान गरिबक्सेको छ ।
आज राजाबाट देशवासीको नाउँमा जारी गरिबक्सेको सन्देशमा उक्त कुरा बताईबक्सेको हो । मौसुफबाट जारी बिज्ञप्तिमा भनिबक्सेको छ ः मेरा भावनाप्रति श्रद्धा, शूभेक्षा राख्दै देशको सून्दर सपना देख्ने सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजूभाइहरुलाई धैर्य, दृढता र साहसकासाथ अघि बढ्न आव्हान गर्दछू ।
अहिले देशको भुभाग मिचिएको छ कोरोनाका कारण जनताको गाँस बाँस कपास सबै खोसिएको अवस्थामा कोरोनरु महामारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रुपमा गणतन्त्रवादीहरुले परिणत गरिरहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिबक्सँदै । नेपाल गणतन्त्रवादीहरुको पेवा नभइकन यो राजाहरुबाट निर्मित राज्य भएको कुरालाई समरण गराई बक्सँदै राजाहरुबाट संरक्षित तथा विकास तथा समृद्ध उन्मुख गराइरहेको मुलुकलाई गणतन्त्रको नाउँमा निषेध तथा इतिहासलाई समाप्त गर्ने मात्र नभई देशलाई नै परतन्त्र बनाउने कार्य भइरहेको बताईबक्सँदै भनिबक्सेकोमा छ ः
आजको यो काल खण्डमा परस्पर आरोप प्रत्यारोप गरेर वा निषेध र प्रतिशोधको भावना राखेर कसैको हित कदापि हूंदैन । नेपाल राष्ट्रको एकिकरण, नेपालको स्वाधिनताको संरक्षण र सर्वतोमूखी विकासको चिन्तन कहिले, कसले र कोबाट भया,े त्यो आम हेक्काको विषय भैसक्यो । त्यस्तो गौरवमय इतिहासलाई स्वीकार गरेर जान सक्नू पर्दछ । राष्ट्रियता नै हाम्रो मुल मन्त्र हो र एकता नै हाम्रो शक्ति हो । यही ऐतिहासिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्दै अतितबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नू नै हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य र धर्म हो ।
राजाबाट वर्तमान अवस्थामा जनताले भोग्नु परेको पीडा र सडकमा भइरहेको आन्दोलनकोबारे गणतन्त्रवादी सरकारसंग प्रश्न गरिबक्सेको छ । राजा गणतन्त्रवादी दल तथा सरकारलाई प्रश्न गरिबक्सेको छ हाम्रो देशभक्ति, स्वाधिन स्थिति एवं स्वाभिमानमाथि बराबर किन प्रश्न, सन्देह र विवाद विग्रह उत्पन्न हून्छ ?
जनताको सूरक्षा, स्वास्थ्य र जिविकाका विषयमा किन अलमल, असन्तोष र आक्रोस उठिरहन्छ ?
रोगको महामारी, राष्ट्रियताको संकट, सिमा समस्या, राष्ट्रहित विरुद्धका सन्धि संझौता तथा हत्या, हिंसा र आत्महत्या जस्ता जल्दा बल्दा र दूखद विषय सन्दर्भमा पनि किन सधैंभरि विवाद आइरहन्छ ? भ्रष्टाचार, लापरवाही, पक्षपात र भेदभावका कूरा किन दिनौं उठिरहन्छ ?
यस्ता यावत विषयलाई लिएर हाम्रा होनहार यूवाहरु, तमाम देशभक्त स्वतन्त्र नागरिकहरु सडक संघर्षमा किन उत्रिरहनू पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ ?
राजाबाट सोधी बक्सेको प्रश्नको जवाफ दिने आँट र हैसियत गणतन्त्रवादीहरुमा छैन तर यसको नकारात्मक जवाफ भने अवश्य नै दिनेछ ।
राजाबाट अहिले देश समाप्त हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिबक्सँदे गणतन्त्रवादीहरुलाई अन्तिम अवसर दिईबक्सँदै सहकार्य, संम्बाद र सहमति गर्न आह्वान गरिबक्सेको छ । यदी यसो नभएमा गणतन्त्रवादी ै समाप्त हुने चेतावनी समेत दिईबक्सँदै भनिबक्सेको छ ः आजको यो काल खण्डमा परस्पर आरोप प्रत्यारोप गरेर वा निषेध र प्रतिशोधको भावना राखेर कसैको हित कदापि हूंदैन ।
राजाका सम्बाद सचिब डा. फणिराज पाठक मार्फत जारी गरिबक्सेको राजाको सन्देशको
पुर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट बक्सेको सन्देश
नेपाल बहूजातीय, बहूभाषिक र बहूबिध भौगोलिक विशेषता रहेको मूलूक हो । परस्पर मेलमिलाप, समन्वय, एकता तथा सामाजिक सदभाव हाम्रो सनातनिक मान्यता हो । त्यसैले अहिले देशमा पनपनाउंदै गएको जातीयता, बर्गियता र क्षेत्रीयताका संकृर्ण दूर्भावनाले राष्ट्रियता र ऐतिहासिक राष्ट्रिय अस्मितालाई राम्रो गर्दैन ।
अहिले नेपाल पनि विश्वव्यापी कोरना महामारीबाट आक्रान्त छ । यो अकल्पनीय व्याधीबाट जीवन गूमाएका र पिडाग्रस्त रहेका सबैप्रति श्रद्धा तथा समवेदनाकासाथ संक्रमित सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । संक्रमक रोगको यो समयमा नेपाली जनताले भोग्नू परेको गांस, वास र कपास लगायतका विविध समस्या समाधान गरियोस् भन्ने आग्रह पनि गर्दछू । साथै यो अवधिमा बढ्दै गएको मानसिक वेदना, सामाजिक विकृति एवं आर्थिैक बेतिथिप्रति म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छू ।
विविध वाध्यताका कारण विदेशिएका कतिपय नेपालीहरु स्वदेश फर्कने क्रममा रहेका छन् । चूनौति पछि आएको यो समय सन्दर्भ एक असर पनि र अवसर पनि हो । फर्कने सबैको श्रम, शिप र सामर्थको सदूपयोग गरि आफ्नै देशभित्र इलम, उद्यम र काम धन्दाको व्यवस्था मिलाइनू पनि नितान्त जरुरी रहेको छ । बदलिंदो विश्व व्यवस्थालाई बूझेर अब हामीले हाम्रो आफ्नो प्रकृति, रिति, संस्कृति र पद्दतितिर फर्कनू जरुरी देखिन्छ । यसबाट नै हाम्रो स्वाभिमान र स्वावलम्वनको परिपाटी फेरि कायम हून्छ । केहि दशक अघिसम्म आफ्नै गौरवगाथा, मौलिक मान्यता र आर्थिक क्षमतामा उभिएको देशको शिर फेरि ठाडो पार्नू परेको छ ।
हाम्रो देशभक्ति, स्वाधिन स्थिति एवं स्वाभिमानमाथि बराबर किन प्रश्न, सन्देह र विवाद विग्रह उत्पन्न हून्छ ?
रोगको महामारी, राष्ट्रियताको संकट, सिमा समस्या, राष्ट्रहित विरुद्धका सन्धि संझौता तथा हत्या, हिंसा र आत्महत्या जस्ता जल्दा बल्दा र दूखद विषय सन्दर्भमा पनि किन सधैंभरि विवाद आइरहन्छ ?
भ्रष्टाचार, लापरवाही, पक्षपात र भेदभावका कूरा किन दिनौं उठिरहन्छ ?
यी सब सोचनीय विषय र विचारणीय कूराहरुको प्रश्नहरु उब्जिरहेको छ ।
राष्ट्रको यो विषम स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर यही असार महिनामा पर्ने मेरो जन्मदिनलाई उत्सवकारुपमा नमनाउने निर्णय गरेको छू । साथै यतिखेर मेरा भावनाप्रति श्रद्धा, शूभेक्षा राख्दै देशको सून्दर सपना देख्ने सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजूभाइहरुलाई धैर्य, दृढता र साहसकासाथ अघि बढ्न आव्हान गर्दछू ।
असार १०्, २०७७